Moving Library . Buugaag Geeddi ah / waxay bilaabayaan caawa
Hargeysa Isniin 2 July 2012 SMC
Bushaaro – waa mar kale iyo Buugaag geeddi ah!
Maktabadda Wareegta oo sannadkan laba jirsan doonta waxay socdaalkeeda dhiganaha qoran ka bilaabi doontaa magaalo madaxda gobolka Awdal ee cidhifka galbeed waddanka maalinta taariikhdu tahay 2da July 2012. Waxana ay ku soo afjarmi doontaa magaala madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ee cidhifka bari ee waddanka. Buuggaagtan geeddiga ahi oo safar ku jiri doona muddo toddobaad ah, waxa ay marti u noqon doonaan Naadiyada Akhriska ee magaalooyinka waawayn ee dalka, waxana fikirka ka danbeeyaa yahay sidii loogu baraarujin lahaa mas'uuliyiinta heer degmo iyo gobol baahida rasmiga ah ee loo qabo maktabado wax lagu akhristo iyo in ay bulshadu guud ahaan ku baraarugto qiimaha wax akhriska iyo wax qorista.
Maktabaddan Wareegtaa waxa ay qayb ka tahay Bandhigga Buugaagta Caalamiga ah ee Hargeysa. Waa buugaag geeddi ah oo xubnaha Naadiyada Akhriska, qorayaal, abwaano, wax garadka magaalooyinka iyo hawlwadeennada redsea kusoo marin doonaa gobollada dalka.
Kal hore waxa ka qayb-galay kumannaan qof oo aad u soo dhaweeyey buugaagtii kala duwanaa ee magaalooyinka la geeyay, iyaga oo ka qayb-galay dood-cilmiyeedyo iyo kulamo kala duwan.
Haddaba si aad u ogaato goobta iyo xilliga lagu soo beegan yahay magaaladaada, waxa aad kala xidhiidhaa Naadiga Akhriska ee magaaladaada. Faahfaahin dheeraad ah waxa aad ka heli kartaa mareegta intenetka ee www.hargeysabookfair.com amase www.redsea-online.com